1 Tantara 2 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 2
Ny roa ambin'ny folo lahy, zanak'i Jakoba - Ny taranak'i Jodà.
1Ireto no zanak'Israely: Robena, Simeona, Levì, Jodà, Isakara, Zabolona, 2Dàna, Josefa, Benjamina, Neftalì, Gada, ary Asera.
3Zanak'i Jodà: Hera, Onàna, sy Selà: izy telo lahy ireo no naterak'ilay zanakavavin'i Soe, ilay vehivavy Kananeana, taminy. Hera lahimatoan'i Jodà dia ratsy fanahy teo imason'ny Tompo, ka nasiany ho faty. 4Thamara, vinantovavin'i Jodà, niteraka an'i Faresa sy Zarà taminy. Dimy ny lahy rehetra, zanak'i Jodà.
5Zanak'i Faresa: Hesrona, sy Hamola. 6Zanak'i Zarà: Zamrì, Etàna, Emàna, Kalkala, ary Darà: dimy lahy izy rehetra. 7Zanak'i Karmì: Akara izay nanahirana an'Israely, tamin'ny fahadisoany momba ny zavatra natao anatema. 8Zanak'i Etana: Azariasa.
9Zanaka naterak'i Hesrona: Jerameela, Rama ary Kalobi.
10Rama niteraka an'i Aminadaba. Aminadaba niteraka an'i Nahasona, lohan'ny taranak'i Jodà. 11Nahasona niteraka an'i Salmà, Salmà niteraka an'i Booza, 12Booza niteraka an'i Obeda, Obeda niteraka an'Isaia, 13Isaia niteraka an'i Eliaba lahimatoany, Abinadaba lahiaivo, Simaà fahatelo, 14Natanaela fahefatra, Radaia fahadimy, 15Asoma fahenina, ary Davida fahafito. 16Ny anabavin'ireo dia Sarvià sy Abigaila. Zanak'i Sarvià: Abisaia, Joaba, Asaela, telo lahy. 17Abigaila niteraka an'i Amasà, ary ny rain'i Amasà dia Jetera, Ismaelita.
18Kaleba zanak'i Hesrona, niteraka tamin'i Azoba vadiny, sy tamin'i Jeriota. Indreto ny zanany lahy naterak'i Azobà taminy: Jazera, Sobaba, sy Ardona. 19Ary maty Azobà, ka naka an'i Efratà ho vady Kaleba; io no niterahany an'i Hora. 20Hora niteraka an'i Orì, ary Orì niteraka an'i Bezeleela. 21Manaraka izany, niray tamin'ny zanakavavin'i Makira, rain'i Galaada, Hesrona; efa enimpolo taona izy vao naka azy, ary niteraka an'i Segoba taminy, ravehivavy. 22Segoba niteraka an'i Jaira, izay nanana tanàna telo amby roapolo tany amin'ny tany Galaada. 23Nalain'ny Gesoriana sy ny Siriana taminy ny vohitr'i Jaira, sy Kanata mbamin'ny tanàna momba azy, tanàna enimpolo. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Makira, rain'i Galaada. 24Efa maty tany Kaleba-Efrata, Hesrona, vao niteraka an'i Ashora rain'i Tekoà, taminy Abià vadiny.
25Ny zanakalahin'i Jerameela lahimatoan'i Hesrona dia: Rama lahimatoany, Bonà, Aràna, Asoma, Akià. 26Nanambady hafa koa atao hoe Atarà, Jerameela; io no renin'i Onama. 27Ny zanakalahin-dRama lahimatoan'i Jerameela dia ireto: Moosa, Jamina, Akora. 28Ny zanakalahin'i Onama, dia Semeia sy Jadà. Zanakalahin'i Semeia: Nadaba sy Abisora. 29Ny anaram-badin'i Abisora dia Abihaila, ary izy niteraka an'i Ahobàna, sy Molida taminy. 30Zanakalahin'i Nadaba: Saleda, sy Afaima. Maty tsy niteraka Saleda. 31Zanakalahin'i Afaima: Jesì. Zanakalahin'i Jesì: Sesàna. Zanakalahin'i Sesàna: Oholaia. 32Zanakalahin'i Jadà, rahalahin'i Semeia: Jetera sy Jonatàna. Maty tsy niteraka Jetera. 33Zanakalahin'i Jonatàna: Faleta sy Zizà. Ireo no zanakalahin'i Jerameela. 34Tsy nitera-dahy Sesàna, fa nanan-janaka vavy izy. Nanana ankizilahy Ejipsiana anankiray izy, atao hoe Jeraà, 35nomeny ho vadin'io ny zanany vavy, ka niteraka an'i Eteia taminy. 36Eteia niteraka an'i Natàna, Natàna niteraka an'i Zabada. 37Zabada niteraka an'i Oflala, Oflala niteraka an'i Obeda; 38Obeda niteraka an'i Jehò. Jehò niteraka an'i Azariasa. 39Azariasa niteraka an'i Helesa, Helesa niteraka an'i Elasa, 40Elasa niteraka an'i Sisamoia, Sisamoia niteraka an'i Seloma, 41Seloma niteraka an'Ikamiasa ary Ikamiasa niteraka an'i Elisamà.
42Zanakalahin'i Kaleba rahalahin'i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain'i Zifa, sy ny zanakalahin'i Maresà, rain'i Hebrona. 43Zanakalahin'i Hebrona: Kore, Tafoà, Rekema, ary Samà. 44Samà niteraka an-dRahama, rain'i Jerkaama; Rekema niteraka an'i Samaia. 45Zanakalahin'i Samaia: Maona, ary Maona no rain'i Betsora. 46Efah vaditsindranon'i Kaleba, niteraka an'i Haràna, Mosà ary Gazeza. Haràna niteraka an'i Gezea. 47Zanakalahin'i Jahadaia: Regoma, Joatàna, Gosàna, Faleta, Efah, ary Saafa. 48Maakà vaditsindranon'i Kaleba niteraka an'i Sabera sy Taranà. 49Mbola niteraka an'i Saafa rain'i Madmenà, sy Soe rain'i Makbenà sy rain'i Gabaà koa izy. Ary ny zanakavavin'i Kaleba dia Aksa.
50Izao no zanakalahin'i Kaleba. Zanakalahin'i Hora, lahimatoan'i Efratà: Sobala, rain'i Kariatiarima, 51Salmà rain'i Betleema; Harifa rain'i Betagadera. 52Ny zanakalahin'i Sobala, rain'i Kariatiarima dia: Haroe, Hatsi-Hamenobaota. 53Ny fokon'i Kariatiarima dia: ny Jetreana, ny Afoteana, ny Semateana ary ny Masereana. Avy amin'izy ireo no nihavian'ny Sareana sy ny Estaoliana. 54Zanakalahin'i Salmà: Betleema, sy ny Netofatiana, Atarota-Beta-Joaba, ny antsasaky ny Manaktiana, ny Sareana, 55mbamin'ny fokon'ny mpanoratra monina any Jabesa, dia ny Tiratiana, ny Skomatiana, ary ny Sokatiana. Ireo no Kineana avy amin'i Hamata, rain'ny fianakavian'i Rekaba. >